New COVID-19 kukiya kuuraya indasitiri yebonde & bhizinesi remakondomu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » New COVID-19 kukiya kuuraya indasitiri yebonde & bhizinesi remakondomu
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Entertainment • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Malaysia Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Vanodanana Michato Honeymoons • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
New COVID-19 kukiya kunouraya indasitiri yebonde uye bhizinesi remakondomu
Indasitiri yebonde, iyo inowanzova musika mukuru wemakondomu, yakakanganiswawo nedambudziko rehutano, nevanoita zvepabonde vakatarisana nemamiriro ezvinhu akaoma.
Mubvunzurudzo ichangoburwa naNikkei Asia, CEO wekambani yeMalaysian Karex Berhad, iyo inogadzira anodarika mabhiriyoni 5.5 makondomu pagore, inoti kuderera kuri kuita makondomu kunokonzerwa neCOVID-19 denda-induced lockdowns.
Karex Mukuru wekambani Goh Miah Kiat akati kutengesa kwekambani iyi kwakadzikira nezvikamu makumi mana muzana mumakore maviri apfuura uye kambani iyi ichasiyana-siyana ichipinda mubhizimusi rekugadzira magurovhosi ekurapa kuti riwedzere mari sezvo kudiwa kwekugadzirwa kwayo kwadzikira.
Indasitiri yebonde, iyo inowanzova musika mukuru wemakondomu, yakakanganiswawo nedambudziko rehutano, akadaro, nevanoita zvepabonde vakatarisana nemamiriro ezvinhu akaoma. Goh akanongedza kuvharwa kwehotera nemotel, achiona kuti nzvimbo idzodzo dzainge dzapa privacy.
Maererano Karex CEO, zvirongwa zvakakura zvekugovera makondomu ehurumende zvakarohwawo nedenda re coronavirus.
"Chikamu chikuru [chemakondomu] chinogoverwa nehurumende pasi rese, izvo zvakaderedza [kugovera] zvakanyanya panguva yeCOVID-19," Goh akadaro. “Somuenzaniso, kuUnited Kingdom, National Hutano Service (NHS) akavhara makiriniki mazhinji asina kukosha nekuda kweCCIDID-19, uye makiriniki ezvehutano hwepabonde anopa makondomu akavharwawo,” akawedzera.
Vachitaura nezve hurongwa hwekambani iyi hwekuenda mukugadzira magirovhosi, izvo zvaona kukura kukuru panguva yedenda, Goh akati kugadzirwa kwaizotanga muThailand pakati pegore rino. Mbimbi dzakafanana uye matekinoroji anoshandiswa muzvese zviri zviviri kondomu nekugadzira magirovhosi, akatsanangura.
Karex yakatumira kurasikirwa kwegore rose kwemari yayo ya2020 kupera kwaChikumi, inova kambani yekutanga kubva payakaenda kuruzhinji muna Mbudzi 2013. Mutengo wayo wemugove paBursa Malaysia exchange noseded by almost 50% last year.
Kristin Smeltzer anoti:
Ndira 19, 2022 pa00: 57
Murume wangu akaonekwa kuti aiva nechirwere cheParkinson’s paaiva nemakore 67. Zviratidzo zvake zvakanga zviri kufamba-famba kwetsoka, kutaura kusina kujeka, kutaura kwakaderera, kuderera kwekunyora nemaoko, unyanzvi hwokutyaira hunotyisa, uye ruoko rwake rworudyi rwakabatwa pakona ye45 degrees. Akaiswa paSinemet kwemwedzi ye7 uye ipapo Sifrol uye rotigotine zvakaiswa izvo zvakatsiva Sinemet asi aifanira kumira nekuda kwemigumisiro. Takaedza pfuti yese yaiwanikwa asi hapana chaishanda. Pave paine zvishoma kana paine kufambira mberi mukutsvaga kurapwa kwakavimbika, ndakasiya meds yangu nekuda kwemhedzisiro. Mutarisiri wedu akatizivisa kuKycuyu Health Clinic Parkinson kurapwa kwemishonga. Kurapwa kwacho chishamiso. Murume wangu akapora zvakanyanya! Shanyira kycuyuhealthclinic. co m